March 2013 ~ လမင်းတရာ
IN Facebook - ON 2:20 PM No comments
ဒါလေးကတော့ အသုံးလိုတဲ့သူ ပြန်သုံးရအောင် တင်ပေးတာ။ သုံးရတာအဆင်ပြေ၏
Gtalk လိုပဲအဆင်ပြေတယ် ချက်တင်ကနေ၀င်ပြီး Facebook စာမျက်နှာသွားလည်းရ
Gtalk လိုပဲ Mail စာအိပ်ပုံလေး နှိပ်ရင် Gmail တန်းရောက်သွားသလိုပဲ ကောင်းတယ်
Remember Password လုပ်ခဲ့ရင် ကွန်ပျုတာဖွင့်တာနဲ့ အော်တိုပွင့်တယ် အသစ်ကြီး
ပြန် ရိုက်ရတာ ပျင်းစရာ..အော်လိုက်တာနဲ့ တန်းပွင့်ရင် ဘီလောက် ကောင်းမလဲ...။
လိုချင်ရင် ဒီလင့်မှာယူ -http://www.facebook.com/Messager Ftalk
IN Players - ON 4:07 PM No comments
Portable player လေးထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် SmPlayer လေးပါ portable
လေးဖြစ်လို့ဘယ်စက်မှာမဆို Install လုပ်စရာမလိုပဲတိုက် ရိုက်အသုံးပြုလို့
Download>>>>solidfiles (or) dropbox (or) sharebeast
စာလုံးကလေးတွေကို ခုန်အောင်လုပ်ပြီး ညွှန်းကြည့်ရအောင် ..
IN Blog ဆိုင်ရာ - ON 2:27 PM No comments
ကိုယ့် ဘလောဂ့် မှာ စာလုံး ကလေးတွေ ကို ရေးပြတဲ့ အခါ မှာ ကိုယ် က သတိ ထားစေချင်တဲ့ စာလုံးကလေးတွေ ကို ဖော်ပြချင်တဲ့အခါ မှာ စာလုံးကို Bold တင်တာတို့ Italic ထားတာတို့ ဘာတို့ကို သုံးပြီးတော့ ရေးကြတာပေါ့ .. အခု ကတော့ စာလုံးလေးတွေ ကို ခုန်နေအောင်လုပ်တာတို့ .. နောက် က background ကလေးနဲ့ ထားတာတို့ကို ပါ .. Html ကို အတော် အသင့် သိ ထားတဲ့ လူတွေ အတွက်ကတော့ လွယ်လွယ် လေးပါ .. မသိသေးသောသူများအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်ခင်ဗျာ .. သိသောသူများ အတွက် တော့ ကျော်ပြီးတော့ ဖတ်သွားပေးကြပါ .. :D .Bold တင်တာ underline တားတာ Italic ထားတာတွေ ကတော့ သိကြမှာပါ .. ရေးလို့ ရတာကလေးတွေ ကို အောက် မှာရေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ... (၆) မျိုးရေးထားလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ ..
အခုအောက်က တော့ ကိုယ်ရေးတဲ့ စာလုံး ကို ဘေးက နေပြီးတော့ ဘောင်ခတ်တာကလေးပါ .. နမူနာပုံစံ ကလေးကို ကြည့်ကြည့်ပါဦး ...
အဲဒီ့ လိုကလေးရေးမယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ကကုဒ်ကလေးနဲ့ ရေးလို့ရပါတယ် ..
<span style="border: 2px solid rgb(30, 0, 255);">သင်ရေးချင်သောစာ</span>
နောက်တစ်မျိုးကတော့ ကိုယ်ရေးထားတဲ့ စာကို မဟုတ်ဘူးတို့ဘာတို့ ပြောချင်တဲ့ အခါမှာသုံးတာပါ ..
နောက်တစ်မျိုးကတော့ ကိုယ်ထင်ရှားစေချင်တဲ့ စာလုံးရဲ့နောက်မှာ နောက်ခံအရောင်ထည့်တာပါ ..
နောက်ခံ background အရောင်ကတော့ကိုယ်ကြိုက်သလို ပြောင်းလို့ရပါတယ် ...
အခု ဟာကတော့ စာလုံးကလေးကို ခုန်နေအောင်လုပ်တာကလေးပါ .....
ဒါကတော့ သချာင်္ဂဏန်း တွေမှာလိုပေါ့ ထပ်ညွှန်းတင်တဲ့ ပုံစံသဘောမျိုးပါ ..
ဒါကတော့ သချာင်္ဂဏန်း တွေမှာ ဘေ့စ်မှာချတဲ့ ပုံစံသဘောမျိုးပါ ..
စာလုံးကလေးတွေကို ဖော်ညွှန်းပြရင်း ပျော်ရွှင်ကြပါစေခင်ဗျာ ...
IN Photoshop, Portable - ON 2:23 PM No comments
Adobe Photoshop CS6 Portable လေးပါ ... Portable ဆိုတော့ Run စရာမလိုပဲ ကိုယ်လိုတဲ့ အချိန်မှ သာ ထုတ်သုံးရတဲ့ အတွက် အဆင်ပိုပြေပါတယ် .. ပြီးတော့ ဆိုဒ်အနေနဲ့ ကတော့ အရင်က 400 ကျော် 500 mb လောက် ဒေါင်းရတာကို အခု 100 mb ကျော်ကျော်လောက်ကလေးနဲ့ အသာလေး ဒေါင်းပြီး တော့ သုံးရုံပါပဲ ... 32 Bit နဲ့ 64 Bit အတွက် နှစ်မျိုးလုံးကို တင်ပေးထားလိုက်ပါတယ်... ကျွန်တော်စမ်းကြည့်တာတော့ နှစ်ခုလုံး အဆင်ပြေပါတယ် ..... ထွက်တာကတော့ကြာနေပါပီ ... ဒေါင်းရတာ ကြာမှာစိုးလို့ မသုံးပဲ နေသူများ အတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ... အောက်မှာ dropbox ကနေပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ... Amazon ကနေတော့ ကျွန်တော် နောက် အဆင်ပြေတဲ့ အချိန်မှာ ထပ်ပြီးတော့ တင်ပေးလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ ... ကဲ .. ပုံတွေ ကို ရွိုင်း ချင်သူများ ဒေါင်းနိုင်ပါပြီ ခင်ဗျာ .... အသုံးပြုနည်းကတော့ အခု တင်ပေးလိုက်တဲ့ ဖိုင်ကို double click ပေးလိုက်ပါ .. ပြီးရင် next => browse မှာတော့ ကိုယ် သွင်းချင်တဲ့ နေရာလေးကို ရွေးပေးပါ .. ရွေးပြီး ရင် Install လုပ်လိုက်ပါ ... ဥပမာ desktop ကို ရွေးပေးတယ်ဆိုရင် desktop ပေါ်မှာ PhotoshopPortable ဆိုပြီးတော့ ဖိုင်လေး နဲ့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် .. အဲ့ဒီ့ ကနေပြီးတော့ သုံးလိုက်ပါ ... အဆင်ပြေ ပါတယ် .....
IN ဗဟုသုတ, အထွေထွေ - ON 2:35 PM No comments
မူလပိုစ့်ရေးသူကတော့စေတန်ဂေါ့ ဖြစ်ပါတယ် တော်တော်ကို ဗဟုသုတရမိလို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါသည် ။ ကျွန်တော့် blog မိတ်ဆွေတွေရော ဘယ်အဆင့်မှာပါလဲ ဆိုတာစမ်းစစ်ကြည့်ကြပါဦး၊ ယခုအချိန်မှာ လူတိုင်းဟာ Computer ကိုအသုံးပြုနေကြပြီ၊ တချို့ဆို တစ်နေ့ကို တခါလောက် အွန်လိုင်း မဝင်ရရင် မနေနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ အင်တာနက်မသုံးပဲနဲ့ Computer ကြီးပဲ သီးသန့် သုံးနေတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့် လူတွေ Computer ကိုနေ့စဉ်သုံးနေရတာလဲ။ မရှိလို့ မသုံးတဲ့လူတွေရှိသလို။ ရှိရဲ့နဲ့မသုံးတဲ့လူတွေလည်း ရှိကြတယ်။
ဘာကြောင့်သူတို့တွေကကောမသုံးကြတာလဲ။ ကျွန်တော် သိသလောက် ရေးကြည့်မယ်လေ။
ပုံမှန်အားဖြင့် Computer အသုံးပြုသူ ၃ မျိုး ၃ စား ခွဲနိုင်ပါတယ်။
1. End user အဆင့်
2. Advanced user အဆင့်
3. Developer or creator အဆင့်
End User အဆင့်
ပုံမှန် အသုံးပြုသူတွေပေါ့။ စာစီစာရိုက်လုပ်တယ်။ သီချင်းနားထောင်တယ်။ ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်။Game ဆော့ကြတယ်။ အင်တာနက်သုံး။ mail စစ်။ computer ကို သုံးတတ်ရုံပဲလေ။ သူတို့အတွက် အသုံးဝင်တဲ့အရာတွေကို ပဲအသုံးပြုကြတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ကတော့ Computer ကဘဝမှာ ဖျော်ဖြေဖို့အတွက် လုပ်ငန်းအတွက် အပျင်းပြေဖို့အတွက် အသုံးပြုကြတယ်။ တချို့တွေဆို software တောင် မသွင်းတတ်ကြဘူး။ သူတို့အနေနဲ့ကတော့ ၁ ရက်လောက် computer မသုံးရလည်း ဘာမှဖြစ်မသွားဘူး။ ဒါပေမယ့် ၂ ရက်လောက် မသုံးရရင်တော့ မနေနိုင်တော့ဘူးလေ။ အလုပ်တွေမပြီးမှာ computer သုံးနေကျအချိန် မသုံးရရင် ပျင်းနေတတ်ရော။ online ကိုတော့ အပျင်းပြေဖို့ social အတွက် မသိတာတွေ ရှာဖို့အတွက် အသုံးပြုကြတယ်လေ။
Advanced User မရောက်ခင် အဆင့်
သူကတော့ဟိုစပ်စပ်ဒီစပ်စပ်ပဲ။ သူများတွေထက်ပိုသိချင်တယ်။ အများရှေ့မှာနည်းနည်းလေး ပညာပြတတ်ကြတယ်။ကိုယ်ဘာတွေလုပ်တတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ အဓိက computer မှာ ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ။ နောက်ပြီး ပျက်ရင် ဘယ်လိုပြင်ရမလဲ။ ဟိုကလိ ဒီကလိ လုပ်တတ်ကြတယ်။ အဲဒီ အဆင့် user တွေ လက်ထဲမှာ computer က အပျက်များတယ်။ သူတို့ကတော့ မသုံးရင် မနေနိုင်ဘူး။ အမြဲတန်း ကလိနေရမှ ကျေနပ်နေတာ။ online လဲ အမြဲလိုလိုသုံးတတ်ကြတယ်။ တွေ့သမျှ download ချ။ ပြီးရင် စမ်းကြည့်။ စတာတွေ လုပ်တတ်ကြတယ်။ online ကို အပျော်အနေနဲ့ကော ပညာအနေနဲ့ကော အသုံးချတယ်။
Advanced User အဆင့်
သေသေချာချာသိသွားပြီ။ လေ့လာစရာတွေတော့ ရှိနေဆဲပဲ။ ဒါကြောင့် အင်တာနက် ပုံမှန်သုံးဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်အတွက် computer ကို အသုံးချတယ်။ computer က ဖော်ဖြေမှုဆိုတာထက် ကိုယ့်ဝါသနာဖြစ်သွားပြီ။ကိုယ့်ဝါသနာတွေကို computer နဲ့ ပေါင်းစပ်အသုံးချတယ်။ ပြသနာပေါင်းစုံလည်း တွေ့ကြုံဖြေရှင်းပြီးသွားပြီ။ အမြဲတန်းလိုလို အင်တာနက် သုံးဖြစ်တယ်။ ဟိုပြင်ဒီပြင် အမြဲလုပ်တတ်တယ်။
ကိုယ့် စက်ကို တတ်နိုင်ရင် အမြဲ Upgrade လုပ်တတ်ကြတယ်။ online ကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးချတယ်။ ပညာတွေ မျှဝေတယ်။ မသိတာတွေ မေးမြန်းတယ်။
Developer or creator အဆင့်
သူကတော့ ဝါသနာပါရာလမ်းကို လျှောက်လှမ်းနေတဲ့သူတွေ အလုပ်အတွက် အသုံးပြုနေတဲ့လူတွေ သုံးကြတယ်။ နေ့စဉ်သုံးဖြစ်ကြတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ online ကောတခြားနေရာတွေကနေ အမြဲ ပညာယူကြတယ်။ online ကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးချတယ်။ သူတို့အတွက် အချိန်က သိပ်မရှိဘူးလေ။ တချို့တွေကလည်း ပညာတွေ မျှဝေကြတယ်။ မသိတာတွေ ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေတယ်။ မတွေ့ရင်လည်း မေးဖို့ ဝန်မလေးကြဘူး။
Credit to: http://sarmyatnhar.blogspot.com
IN Driver Software - ON 12:00 PM No comments
PC မှ Driver တွေကိုရှာဖွေ Download ဆွဲပေးခြင်း၊ Update လုပ်ပေးမဲ့အပြင်၊ BackUp
,Restore တို့ပါအသုံးပြုနိုင်တဲ့ Driver software ပါ။အင်တာနက်ချိန်ဆက်ထားဖို့တော့
Full Version အတွက် Regkey ဖိုင်လေးကို D-Click နိုပ်ပြီး Run ပေးပါ။
Size ~ 8.19 MB
IN နည်းပညာစာအုပ်များ - ON 11:46 AM No comments
Pro တွေရဲ့ Photoshop Lesson9အုပ်ပါပါတယ် ခင်ဗျာ။ လက်ရာတွေကတော့ မှတ်သား စရာ တွေ ချည်းပါပဲ့ ခင်ဗျား။ MMphotoshop က lesson တွေကို အခုပဲ့ PDF ပြောင်းပြီး တင်ပေးလိုက်တာ ပါ။ Photoshop သမားတွေတွက် အသုံးဝင်လှ ပါတယ် ခင်မျာ.... Download ရယူနိုင်ကြပါပြီ
Download=>Solidfiles / Mediafire /
IN Internet Download Manager - ON 8:20 AM No comments
ဒါလေးကတော့ ခုလေးတင်ပဲ ထွက်လာတဲ့ နောက်ဆုံး Update Version လေးပါ... Full Version အတွက် အထဲမှာပါတဲ့ Patch ဖိုင်လ်လေးကို အသုံးပြုတဲ့အခါ မိမိတို့ စက်မှာ တင်ထားတဲ့ Antivirus ကို ခဏ Disable ပေးထားပြီးမှ အသုံးပြုပါ... အဆင်ပြေကြပါစေခင်မျာ.............
IN Burning - ON 7:30 AM No comments
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့သွားလေရာ သယ်သွားနိုင်တဲ့ CD/DVD Burning Software လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်မျာ...CD/DVD နှင့်သက်ဆိုင်တဲ့ဖန်တီးချက်တွေကို ကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်နိုင်ရုံ
မျှမက CD/DVD အခွေတွေထဲက Data တွေကိုလည်း Recovery ပြန်လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်..အခြားအသုံးဝင်
Burning Tools များလဲပါဝင်ပါတယ်ခင်မျာ..Download ရယူနိုင်ကြပါပြီ
Download=>Solidfiles / Mirror
BurnAware 6.1 - (19-Mar-2013)
IN Keygen, Product Key Finder - ON 7:26 AM No comments
မိမိကွန်ပျူတာအတွင်း ထည့်သွင်းထားသော Software တွေ.. Game တွေရဲ့ License Key / Serial Key / Product Key တွေကို ရှာဖွေနိုင်ရုံသာမက...Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Office 2003, Office 2007 Professional, etc စတဲ့ Windows Product Key တွေကိုလည်းရှာဖွေပေးနိုင်ပါတယ်..ဒါအပြင် Network အတွင်းမှာရှိတဲ့ Software တွေရဲ့ Product Key တွေကိုပါရှာဖွေပေးနိုင်တဲ့အတွက် Serial Key / License Key
ပျောက်သွားသူ များ.. သိရှိလိုသူများအတွက် အထူးအသုံးဝင်မယ့် Software လေးဖြစ်ပါတယ်..လိုအပ်သူ
များ Download ရယူနိုင်ကြပါပြီ
IN Software - ON 2:19 PM No comments
ဘယ်နိုင်ငံပဲရောက်နေပါစေဒီ software လေးရယ် internet လိုင်းနဲ့ရှိနေရင်သူ့ရဲ့ကွန်ပျူတာ
Desktop ကိုကိုယ့်ဆီကနေလှမ်းသုံးနေလို့ရပါတယ်။အသုံးပြုနည်းက version
5 မှာလဲရှင်းပြထား တာရှိပါတယ်ပုံစံနဲနဲပြောင်းသွားလို့ထပ်ရှင်းပြထားတယ်
အောက်မှာကြည့်လိုက်ပါနှစ်ဖက်စလုံး software လေးကို run ထားပါ၊
run လိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ID နဲ့ password ဖေါ်ပြနေပါလိမ့်မယ် သူ့ဖက်
ကိုကိုယ်က၀ယ်မယ်ဆိုပါဆို့ သူ့ရဲ့ ID နဲ့ password ကို gtalk,facebook
တစ်ခုခုကနေလှမ်းတောင်းပြီးအောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း Partner ID ဆိုတဲ့ box
မှာထဲ့ပြီး connect to partner ကိုနိုပ်ပါ ခဏနေရင် password
တစ်ဖက်လူရဲ့ password ကိုထဲ့ပြီး Logon နိုပ်လိုက်ပါသူ့ရဲ့
computer Desktop ကိုကိုယ့်စက်ကနေလှမ်းသုံးလို့ရပါပြီ
ID နဲ့ password က software တစ်ခါဖွင့်တိုင်းပြောင်းနေ
IN Software, windows 8 - ON 11:42 AM No comments
Windows 8 ပုံစံ အသုံးပြုချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် နောက်ဆုံးဗားရှင်းပါအခုတင်ထားတဲ့ပုံက ကျွန်တော်စက် XP မှာ တင်ထားတဲ့ပုံပါWindows 8 Transformation Pack Install လုပ်လိုက်ရင်
IN Windows ဆိုင်ရာ, နည်းလမ်းများ - ON 10:49 AM No comments
Boot Time ကို ကျွန်တော်တို့ Window စတက်တဲ့အခါမှာ Boot time ကြာနေတာ ကြုံဖူးကျမှာပါ။ အဲဒီလို ကြုံရင် အောက်ပါအတိုင်းဖြေရှင်းကြည့်လိုက်ပါ။
IN Windows ဆိုင်ရာ, နည်းလမ်းများ - ON 10:45 AM No comments
IN Dictionary - ON 2:00 PM No comments
အင်္ဂလိပ်ဘာသာကနေ မြန်မာဘာသာကို စကားစုအတိုင်း ဘာသာပြန်ပေးနိုင်တဲ့ Software လေးပါဘဲ။ ဒီကောင်လေးကလည်း အခြား Dictionary တွေထက် ပိုပြီးမကောင်းရင်တောင်သူတို့ နည်းတူကောင်းတဲ့
Dictionary လေးဖြစ်ပါတယ်။ အဲ နည်းနည်းလေးတော့ပြောပြစရာရှိတယ်ဗျ။သူက မြန်မာ 3Unicode နဲ့
Zawgyi Font နှစ်မျိုးလုံးမှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်ဗျာ။ ဘာသာပြန်ပေးတဲ့နေရာမှာတော့စကားလုံးတစ်လုံး
ချင်းအလိုက် ဘာသာပြန်ပေးတဲ့အတွက် စကားစုတစ်ခုကို ဘာသာပြန်ပေးတဲ့နေရာမှာတော့ မိမိကိုယ်
တိုင်ဘဲ ဆီလျှော်အောင် ဘာသာပြန်ပေးရပါလိမ့်မယ်ဗျာ။ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ
Download>>>sharebeast (or) solidfiles (or) Tusfiles
Pen Drive (သို့) Memory Stick ကို အတု၊အစစ် စစ်ဆေးနည်း
IN USB - ON 1:41 PM No comments
မင်္ဂလာပါ။အခုတလော Pen Drive ပဲဖြစ်ဖြစ် Memory Card ပဲဖြစ်ဖြစ် ၀ယ်တဲ့ အခါမှာ သိတိထားသင့်ပါတယ်။ဈေးနည်းတယ်
ဆိုပြီး မ၀ယ်သင့်ပါဘူး။အခုအချိန်မှာ အတုတွေတော်တော်များ
ဈေးကွက်ထဲကိုရောက်နေပါတယ်။တကယ်လို့သင်ဟာ သင့်ရဲ့ Pen Drive (သို့) Memory Card ကို အတုလား အစစ်လားသိချင်ရင် အခုကျွန်တော်တို့ ပြောပြမယ့်နည်းနဲ့စမ်းသပ်
ပထမဦးဆုံး h2testw ကို Download လုပ်ပါ။
Zip file ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Extract လုပ်ပေးပါ။
Extract လုပ်ပြီးသွားရင် exe file တစ်ခုတွေ့ပါလိမ့်မယ် အဲ့ဒီ exe File ကို Run ပေးပါ။
Program ကို Run လိုက်ပြီ ဆိုရင် ညာဘက်ထိပ်မှာရှိတဲ့ English ကိုနှိပ်ပေးပါ။
Target ဆိုတာကိုရွေးပြီး သင့်ရဲ့ Pen Drive (သို့) Memory Card ကိုရွေးပေးပါ။(Format လုပ်ထားရပါမယ်)
Write+Verify ကိုနှိပ်ပြီး စစ်ဆေးနိုင်ပါပြီ။Pen Drive ရဲ့ Size ပေါ်မှာ မှုတည်ပြီး အချိန်ကြာပါလိမ့်မယ်။
စစ်ဆေးလို့ပြီးသွားတဲ့ အချိန်မှာ Completed without any errors လို့ပြရင် သင့်ရဲ့ Pen Drive ဟာအစစ်ဖြစ်တယ်လို ယူဆနိုင်ပါတယ်။
ဒါမှာမဟုတ် Error တစ်ခုခုပြနေတယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ Pen Drive ဟာ အတု ဖြစ်ပါတယ်။
Pen Drive တွေ Memory Card တွေကို အတုအစစ်ခွဲနည်း ဆိုတာဒါပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့ Post တွေဟာ ကျွန်တော့်တို့ ညီအကိုမောင်နှမများအတွက် နည်းနည်းလေးမျှ အသုံးဝင်တယ်ဆိုရင်
ကျေးဇူးပြုပြီး ညာဘက်မှာ ရှိတဲ့ Like Box မှာ Like လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
IN windows 8, နည်းလမ်းများ - ON 1:35 PM No comments
ပါတယ်။တကယ်လို့ သင်ဟာ Windows 8 သွင်းမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး ဆိုရင် ဒီ Post ကသင့်အတွက် လုံးဝ အသုံးဝင်မယ်လို့ အာမခံပါတယ်။ကဲ Windows 8 ကိုဘယ်လို တင်ရလဲဆိုတာကို ကြည့်ရအောင်။
သင့်ရဲ့ File များကို Backup အရင်လုပ်ပါ။
ဟုတ်ကဲ့ Windows 8 ကိုမတင်ခင် သင့်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ File များကို Backup အရင်လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။
ဥပမာ-သင့် Computer ရဲ့ Partition တစ်ခုခုထဲ ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ External Hard Disk ထဲပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ်
DVD အခွေထဲတွေမှာ သင့်ရဲ့ အရေးကြီး တဲ့ Data တွေကို Backup လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ PC ကို Restart ချပါ။ စက်ပြန်တတ်တတ်ချင်း F2 (သို့) Delete ကိုနှိပ် ပြီးရင် First Boot Device မှာ သင့်ရဲ့ DVD Drive ကိုထားပါ။ဒါမှမဟုတ် F12 ကိုနှိပ်ပြီး DVD Drive ကိုရွေးပါ။ပြီးရင်
ပုံ မှာပြထားတဲ့ ပေါ်လာပြီး အဲ့ဒီနေရာမှာ Second အနည်းငယ်ကြပါလိမ့်မယ်။
မိနစ် အနည်းငယ်ကြာတဲအခါမှာ ပုံ မှာပြထားတဲ့ အတိုင်းပေါ်လာပြီး ပေါ်လာတဲ့ အထဲမှာ ဘာမှာ
မပြောင်းလဲ ပဲ Next ကိုနှိပ်ပါ။
Next Button ကိုနှိပ်ပြီး သွားရင် ပုံ မှာပြထားတဲ့ အတိုင်း Windows Setup Screen ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
Install Now ကိုနှိပ်ပါ။
Install Now Button ကိုနှိပ်ပြီးသွားရင် ပုံ မှာပြထားတဲ့အတိုင်းမြင်ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီ မှာ Product Key
ကိုထည့်ပြီး Next ကိုနှိပ်ပါ။
ပြီးရင် Microsoft ရဲ့ Software License Agreement Windows ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။လေးထောင့် အကွက်မှာ အမှန်ခြစ်ပြီး Next ကိုနှိပ်ပါ။
Next ကိုနှိပ်ပြီး သွားရင် ရွေးချယ်စရာ နှစ်ခုကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အခု ကျွန်တော်တို့က Windows ကိုလုံးဝ
အသစ်သွင်းမှာ ဆိုတော့ Custom ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။(တကယ်လို့ သင်ဟာ အရင် ရှိပြီးသား Windows ပေါ်မှာ ပဲ Windows 8 ကို Install လုပ်မယ်ဆိုရင် Upgrade ကိုရွေးပါ။)
ဘယ် Partition မှာ သွင်းမှာ လဲ ဆိုပြီး ပုံ မှာပြထားတဲ့ အတိုင်းတွေ့ရပြီ ဆိုရင် သင် Install လုပ်ချင်တဲ့
Partition ကို Click တစ်ချက်နှိပ် ပြီးရင် Drive Options (Advanced) ဆိုတဲ့ စာသားကို Click တစ်ချက်နှိပ်
Format ဆိုပြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီ Format ကိုနှိပ်ပြီး Partition ကို Format လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။Format ကိုနှိပ်လိုက်ရင် Windows တစ်ခုပေါ်လာပြီး Format တကယ်လုပ်မှာ လို့မေးလိမ့်မယ်။
(အရေးအကြီးဆုံး သင် Format လုပ်တဲ့အခါမှာ Partition တွေမမှား ပါစေနဲ့။)
Partition ကို Format လုပ်ပြီးသွားရင် Next ကိုနှိပ်ပါ။ ပုံ မှာပြထားတဲ့ Windows file တွေကို Hard Drive မှာ Copy လုပ်ပြီး Windows 8 ကိုသင့်ရဲ့ PC မှာတင်နေပါပြီ။နည်းနည်းတော့ ကြာလိမ့်မယ်။
ပြီးရင် Restart ကြသွားလိမ့်မယ်။
Restart ပြန်တတ်လာ တဲ့အခါ ပုံ မှာပြထားတဲ့ အတိုင်းမြင်ရပြီး။Restart နောက်တစ်ခါ ကြသွားလိမ့်မယ်။
Restart ကနေပြန်တတ်လာတဲ့ အခါ အောက်ပုံတွေမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း အရောင်ရွေး ၊ နာမည် ပေးပြီး Next ကိုနှိပ်ပါ။နောက်ခု Setting ဆိုပြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်။ Use Express Setting ကိုနှိပ်ပါ။
နောက်ပြီး Sign in ဆိုပြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်။သင်ရဲ့ email address ကိုထည့်ပါ။(ကြိုက်တဲ့ Email Address)
ကဲ အောက်မှာ ပြထားတဲ့ ပုံတွေ ထဲကအတိုင်းပေါ်လာရင် သင့်ရဲ့ PC မှာ Windows 8 ကိုသွင်းလို့ပြီးသွားပါပြီ။
IN နည်းလမ်းများ - ON 1:34 PM No comments
Credit to:နွေဦး >> http://www.maukkha.org
IN windows 8 - ON 1:28 PM No comments
Windows + F Charms Menu - Search
Windows + H Charms Menu - Share
Windows + K Charms Menu - Device
Windows + I Charms Menu - Settings
Windows + Q Search For Installed Apps
Windows + Tab Cycle Through Modern UI Apps
Windows + Tabs + Shift Cycle through open Modern UI Apps in reverse order
Windows + . Snaps app to the right (split screen multitasking)
Windows + Shift + . Snaps app to the left (split screen multitasking)
Windows + , Temporarily view desktop
ALT + A4 Quit Modern UI Apps
Windows + E Launch Windows Explorer Window
Windows + L Lock PC and go to lock screen
Windows + T Cycle through icons on taskbar
Windows + X Show Advanced Windows Settings Menu
Windows + Page Down Moves Start screen and apps to secondary monitor on the right
Windows + Shift + M Restore all minimized Windows
Windows + R Open Run dialog box
Windows + Up Arrow Maximize current window
Windows + Down Arrow Minimize current window
Windows + Left Arrow Maximize current window to left side of the screen
Windows + Right Arrow Maximize current window to right side of the screen
Windows + Print Screen TakesaPrint Screen and saves it to your Pictures folder
Windows + Page Up Moves Start screen and apps to secondary monitor on the left
Windows + Pause Break Display System Properties
Windows + V Cycle through notifications
Windows + Shift + V Cycle through notifications in reverse order
Ctrl +0to9Launch/show app pinned to taskbar at indicated number
Windows + Shift +0to9Launch new instance of app pinned to taskbar at indicated number
Altl + Right Arrow View next folder in File Explorer
Altl + Left Arrow View previous folder in File Explorer
Windows + P Choose secondary display modes
Windows + Shift + Switch to previous input language and keyboard layout
IN Portable - ON 11:00 AM No comments
SkypePortable လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် Latest version ပါအလွယ်တစ်ကူ ကိုယ့်
ရဲ့ stick ထဲ့မှာဆောင်ထားပြီးဘယ်စက်မှာမဆို install လုပ်စရာမလိုပဲ အလွယ်တစ်
Download>>>sharebeast (or) solidfiles (or) Dropbox
IN Converter - ON 8:54 PM No comments
FLV ကနေ အခြားအမျီုးစားတွေ ပြောင်းရခက်တယ်ဆိုလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
အဆင်ပြေပါစေ FLVကနေ အခြား ဗီဒီယိုဖိုင်အမျိုးတွေကိုပြောင်းလို့ရပါတယ် ဒီမှာ လေ့လာပြီး အသုံးပြုမယ်ဆို အောက်မှာအဆင်ပြေတဲ့လင့်ကယူသွားလိုက်ပါခင်မျာ....................
IN Recovery Software - ON 12:35 PM No comments
ICare အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် Update လေး တွေလိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
သူကတော့ ဓာတ်ပုံတွေ သီချင်းတွေ မှားဖြတ်မိရင် ပြန်ရှာပေးတဲ့ ဆောစ့်ဝဲလ်ကောင်းလေးတစ်ခု
IN Optimizer, Software - ON 12:24 PM No comments
ကွန်ပျူတာ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပွင့်ပြီး အသုံးပြုချင်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက်
အခု ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တဲ့ ဆောစ့်ဝဲလ်လေးကအထောက်ကူပြုပေးမှာပါ လိုအပ်တဲ့သူငယ်ချင်းများအောက်မှာအဆင်ပြေတဲ့လင့်ကယူသွားလိုက်ပါခင်မျာ..............
IN Internet Download Manager - ON 9:02 AM No comments
Internet Download Manager 6.15 Build 5.1 Full Version ထွက်လာလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
Patch ဖိုင်ကို မသုံးခင် သတိထားရမှာက IDM ကို Exit လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်.. ကွန်ပျူတာရဲ့ ညာဘက်အောက်ထောင့်က Tray ထဲမှာ IDM Icon ကိုညာကလစ်ထောက်ပြီး exit လုပ်ထားရပါမယ်.. ပြီးရင် Antivirus ကို Disable လုပ်ထားရပါမယ်ခင်မျာ........